फिल्म समिक्षा: के निखिलको स्टारडम खस्किएकै हो त ? – Janamukhi.com
फिल्म समिक्षा: के निखिलको स्टारडम खस्किएकै हो त ?
असोज १५, कुनै जमाना यस्तोसम्म थियो, अभिनेता निखिल उप्रेतीको टाउको पोस्टरमा राखेको भरमा फिल्मले जबरजस्त व्यापार गर्थे । प्रायः निर्माताको लगानी त फिल्म रिलिज अगावै वितरकबाट प्राप्त एमजीले सुरक्षित हुन्थ्यो । उनको फिल्म भनेपछि हलको टिकट काउन्टरमा हप्तैसम्म दर्शकको भीड कम हुँदैन थियो । यो देखेपछि निर्माताहरुलाई के चाहियो र ! घरजग्गा नै बेचेर उनलाई फिल्ममा अभिनय गराउनका लागि महिनौसम्म कुर्थे । तर, समय सधैं एकनाश रहँदैन ।
एक समय नेपाली फिल्ममा आफ्नो प्रभुत्व जमाएका एक्सन हिरोको स्टारडम अहिले भुत्ते खुकुरीझैँ भएको छ । नयाँ छिमलका अभिनेताहरुको दबदबासँगै काँचको पर्दाबाट विस्तारै हराउँदै गएका उनका पछिल्ला कुनै फिल्म बक्सअफिसमा सफल छैनन्, ५ वर्षपछि कमब्याक गरेको फिल्म ‘भैरव’ बाहेक । ‘लुटेरा’, ‘किंग’, ‘रुद्र’, ‘पिंजडा ब्याक अगेन’, भिलेन’ उनले कमब्याकपछि गरेका फिल्म हुन् । तर, यी सबै फिल्मले हलमा हावा खाए । बचेखुचेको स्टारडम पनि ध्वस्त भयो ।
पुरानो क्रेज फर्किने सम्भावना नदेखेपछि निखिलले फिल्म छनोटमा हेलचेक्राइ गरेको कतिपयको आरोप छ । उनी अभिनीत पछिल्ला फिल्म हेर्ने हो भने यसलाई गलत भन्न सकिन्न । कतै उनी पैसामुखी भएका त होइनन् ? गत वर्ष प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘भिलेन’ हेरेपछि यो प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्छ । यद्यपि, अझै उनीबाट स्तरिय फिल्मको अपेक्षा गर्ने दर्शकको कमी छैन । कमजोर फिल्मले स्टारडम कमजोर बनाएका निखिल यतिबेला फिल्म ‘भैरव’ को सिक्वेलमा जुटेका छन् ।
फिल्मको नाम ‘आयो भैरव’ जुराइएको छ । फिल्मको निर्देशन उनी आफैंले गर्दैछन् । र, अभिनय पनि । आफ्नो अपोजिटमा उनले श्रीमती सञ्चिता लुईंटेललाई फाइनल गरेको चर्चा छ । फिल्ममा अभिनेता सौगात मल्लको पनि अभिनय रहेको बुझिएको छ । सम्भवतः तिहारपछि फिल्मको छायांकन सुरु हुनेछ । यो फिल्मलाई लिएर केही समययता चर्चामा रहेका निखिलले हालै आफ्ना शुभचिन्तकलाई एउटा ठूलो सरप्राइज दिए, पहिलो पटक म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरेर ।
अहिले नेपाली कलाकारको भिडियोतर्फ झुकाब बढ्दो छ । फिल्मजस्तो महिनै समय नलाग्ने, एक दिनमै छायांकन सकिने र पैसा पनि राम्रो हात पर्ने हुँदा कलाकारहरु भिडियोमा काम गर्न नलोभिने कुरै आउँदैन । निखिल कसरी अपबाद हुनसक्छन् ? तर, करीब २ दशक लामो फिल्मी करिअरमा उनले कहिल्यै म्यूजिक भिडियोमा काम गरेनन् । गरुन पनि कसरी, फिल्ममै भ्याइभ्याइ हुन्थ्यो । अब भने उनी फिल्म छाडेर भिडियोतिर सोझिएका छन् । यो रहर हो कि बाध्यता ? उनै जान्दछन् ।
बद्रि पंगेनी, कला लम्साल र चन्द्रा शर्माको स्वरमा रहेको लोकगीत ‘धानको चामल’ बोलको गीतमा निखिलले ठुम्का लगाएका छन् । यसमा उनको जोडी गायिका कलासँगै बाँधिएको छ । एक्सनमा पोख्त तर नाच्न पिटिक्कै नआउने हिरोको रुपमा चिनिएका उनको गीतमा पनि नृत्य कमजोर देखिन्छ । साथै, उनको स्टारडम खस्किएको गीतको भ्यूजले पनि प्रमाणित गर्छ । एक हप्तामा यो गीतमाथि जम्माजम्मी ५ लाखको नजर परेको छ । चलेको हिरोको गीतलाई यो भ्यूज थोरै हो ।
अभिनेता निखिलले म्यूजिक भिडियो गर्नु आश्चर्यको कुरा पिटिक्कै होइन । राजेश हमालदेखि अहिलेका चल्तीका अभिनेता विपिन कार्कीसम्मले भिडियोमा आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेका छन् । तर, निखिलले करिअरको उतार्धमा भिडियो गर्नुले अनेकन सवाल खडा गरेको छ । लगातार फिल्म फ्लप हुनु र उनलाई लिएर फिल्म बनाउन निर्माता इच्छुक नदेखिनुले भिडियोप्रति उनको मोह बढेको हुनसक्ने कतिपयको विश्लेषण छ । खैर, अब भिडियोमा डिमान्ड राम्रो होस् । शुभकामना ।
रियलको हार संगै युभेन्ट्स र म्यानचेस्टर सिटीको जित